मोदी तेस्रोपल्ट नेपाल आउँदै – Online Jagaran
२८ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०२:४१ May 11, 2018 जागरण
काठमाण्डौं, २८ वैशाख (कान्तिपुर) । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि तेस्रोपटक नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँको यात्रा यसपटक सीधा काठमाडौं नभई प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरबाट शुक्रबार सुरु हुँदै छ ।
मोदीको भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुद र सबल बनाउने सरकारले बताएको छ । १७ वर्षदेखि भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपालमा भ्रमण हुन नसकेका बेला २०७१ साउनमा मोदीले पहिलोपटक भ्रमण गर्नुभएको थियो ।
उहाँको पहिलो भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको कोसेढुंगा मानिएको थियो । २०७१ मंसिरमा दोस्रोपल्ट मोदी नेपाल आएका बेला जनकपुर र मुक्तिनाथ जाने तय भए पनि पछि सुरक्षाका कारण रद्द गरिएको थियो । त्यसपछि मोदीले राजधानीस्थित ट्रमा सेन्टरमा सम्बोधन गर्दै छिट्टै जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ जाने बताउनुभएको थियो ।
यसपटक मुक्तिनाथसमेत जान लागेका मोदीको भ्रमण राजकीयसँगै धार्मिक पनि हो । उहाँको यो भ्रमणमा राजनीतिक सन्देश र मधेसप्रतिको सदासयता पनि उत्तिकै रहनेछ । जनकपुरबाट भ्रमण थाल्नुको अर्थ सम्भवतस् जहाँबाट आफ्नो विश्वास गुम्यो, त्यहींबाट उतार्न खोज्नु पनि हो ।
२०७१ मा सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन दोस्रोपटक नेपाल आएयताका तीन वर्षमा मोदीले समकक्षीका रूपमा केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवालाई दिल्लीमा स्वागत गरिसक्नुभएको छ । भूकम्पको पीडामा परेका नेपालीमाथि संविधानको विषयमा केही असहमति राख्दै ०७२ को असोजपछि भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि जनस्तरमा बिग्रेको सम्बन्धलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने भारतीय प्रयत्नका रूपमा पनि यसपल्टको भ्रमणलाई हेरिएको छ ।
यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीको दिल्ली भ्रमणमा भएको सहमतिलाई सम्झौतामा परिणत गरिने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो । ‘हाम्रो प्रयत्न दिल्लीमा भएका सहमतिलाई सम्झौतामा परिणत गर्ने नै हुन्छ । त्यसमा काम भइरहेको छ,’ ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको रेलमार्ग, जलमार्ग (इनल्यान्ड वाटर वे) र कृषिमा सहकार्यका विषयमा सम्झौताको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । यस अलावा भारतले दिने कुनै सहयोग प्याकेजबारे भने अहिले जानकारी छैन । कुनै सरप्राइज घोषणा भए थाहा छैन ।’
नेपाल आउने अघिल्लो दिन टवीट गर्दै मोदीले आफ्नो भ्रमणले नेपालसँगको सम्बन्धलाई भारतले उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रस्ट हुने बताउनुभएको छ । ‘द्विपक्षीय सहयोगलाई अझ व्यापक बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग विस्तृत कुराकानी गर्नेछु,’ उहाँले भन्नुभएको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउने र आर्थिक विकास हासिल गर्ने नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै मोदीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को अवधारणामा भारत दृढ सहयोगी हुने स्पष्ट पार्नुभउको छ ।
पहिलो दिन, वैशाख २८
–पटनाबाट जनकपुर आउने (बिहान ९ः३०–१०ः००)
–जानकी मन्दिरमा पूजाअर्चना, प्रधानमन्त्री ओलीसँग संयुक्त रुपमा रामायण सर्किट उद्घाटन
–बाह्रबिघामा नागरिक अभिनन्दन
–१ः३० भित्र काठमाडौं आइपुग्ने
–एयरपोर्टबाट हयात होटल
–टुँडिखेलमा गार्डअफ अनर
–उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट
–द्वारिका होटलमा प्रधानमन्त्रीसँग एक्लाएक्लै र डेलिगेसन स्तरमा दुईपक्षीय छलफल
–स्विच थिचेर अरूण तेस्रोको शिलान्यास, संयुक्त वक्तव्य जारी
–प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट रात्रिभोज
दोस्रो दिन, वैशाख २९
–बिहान त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलबाट मुक्तिनाथ प्रस्थान
–मुक्तिनाथमा पूजापछि जो मसोम प्रस्थान
–जोमसोमबाट फेरि काठमाडौं
–पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजाअर्चना
–द्वारिकाज होटलमा राजनीतिक भेटघाट
–भारतीय राजदूतको दिवाभोजमा सहभागी
–भोजपछि राजनीतिक भेटघाट
–राष्ट्रिय सभागृहमा काठमाडौं महानगरका तर्फबाट नागरिक अभिनन्दन
–दिउँसो ४ बजे भारतीय सेनाको विशेष विमानबाट नयाँदिल्ली फिर्ती
Tagged माेदी भ्रमण
रक्सी किन्न तीनपुस्ते बुझाउनुपर्ने !
विपत् प्रतिकार्य सम्बन्धि तालिम मुगुमा संचालन
२९ आश्विन २०७६, बुधबार ०६:३३ October 16, 2019 जागरण
तपाईंको क्षेत्रमा बाढी आउँदै छ कि ? यसरी थाहा पाउनुहोस्
१८ असार २०७५, सोमबार ०६:२८ July 2, 2018 जागरण